Multi-ngwaọrụ WhatsApp, n'ezie? Anyị lelee ya !! | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Ngwa gam akporo, Whatsapp
Ọtụtụ ekwuola banyere nkwado ọtụtụ ngwaọrụ nke WhatsApp na izu ndị na-adịbeghị anya. Ka izu nke ichere, ọ dị ugbu a na beta kacha ọhụrụ ewepụtara nke ngwa izipu ozi, zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya karịa otu ngwaọrụ n'otu oge ahụ, mana yana ụfọdụ ihe mgbochi ndị ọzọ.
Na ọtụtụ ngwaọrụ WhatsApp onye ọrụ ga-enwe isi akaụntụ na ekwentị ya, mgbe ahụ ị ga-enwe ike iji akaụntụ ahụ ruo ngwaọrụ anọ site na weebụ. Ọ bụ nnukwu ọganihu, ihe niile emere na beta nke WhatsApp, ebe ọ bụ na anụ ụlọ ga-erute ọnwa ole na ole sochirinụ, na-enweghị ndekọ ọ bụla a ga-ekpebi.
1 Ihe choro
2 Ebe ịchọta ọrụ
3 Echiche nke m
Ihe kachasị mkpa iji jiri ọtụtụ ngwaọrụ rụọ ọrụ bụ iji beta beta, n'ihi na nke a na ị ga-edebanye maka ya site na Play Store si njikọ ọzọ. Maka nke a, ọ ga - ajụ gị ka ị budata ngwa ahụ, cheta iji ya mgbe ịchọrọ iji ọtụtụ ngwaọrụ.
Ọrụ a yiri nke nke WhatsApp Web, ebe ọ ga-adị mkpa iji nyochaa QR code ịmalite ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla. Nhọrọ WhatsApp Web ga-efu maka otu nke "Njikọ ngwaọrụ", bụ nke ga-egosi site ugbu a gawa, ma ọ dịkarịa ala na ụdị beta.
Ihe niile ga-agafe na isi ekwentị nke ọnụọgụgụ jikọtara ọnụ, yabụ ọ bụrụ na agbanyụrụ ekwentị ahụ, a ga-emechi usoro ndị ọzọ. Ọ dị mkpa ịmara nke a, ọ bụrụ na ị kpebie ihe ọ bụla iji malitegharịa ekwentị, oge niile ga-agwụ maka ihe nchekwa.
N'ime njedebe nke ọtụtụ ngwaọrụ WhatsApp, onye ọrụ agaghị enwe ike izipu ma ọ bụ nata ozi ma ọ bụrụ na ngwaọrụ enweghị ụdị emelitere, enweghị ike ịtọ nkata, yana ọrụ ndị ọzọ ewepụrụ. A maghị ma ọ ga-edozi ya maka mbipute ikpeazụ, na ụbọchị a ga-ekpebi.
Ebe ịchọta ọrụ
A na-ahụ ọrụ ahụ mgbe ọ bụla enwetara nhọrọ ngwa WhatsApp, kpọmkwem ebe WhatsApp Web nhọrọ dị. Naanị usoro ole na ole, ọ ga - ekwe omume ijikọ akaụntụ WhatsApp na ngwaọrụ ndị ọzọ, ọkachasị n'ime anọ kachasị.
Ngwaọrụ ejikọtara ọnụ, dịka ọmụmaatụ, ga-enwe isi ekwentị, wee jiri akaụntụ ahụ na ekwentị ọzọ, mbadamba ma ọ bụ na PC. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu ị ga-ahụ na ọ bụ otu ihe ahụ anyị nwere na WhatsApp Web, ma ugbu a site na nkwado dị iche iche na ngwaọrụ anọ.
The nzọụkwụ site nzọụkwụ dị ka ndị a, cheta iso onye ọ bụla n'ime ha na-ebu ya nke ọma:
Debanye maka mmemme WhatsApp Beta a njikọ
Ibudata ma wụnye ngwa ahụ ma wụnye ya na ngwaọrụ gị
Ugbu a na ekwentị gị, chọọ ụdị WhatsApp Beta, ozugbo mepere, pịa ebe atọ dị n'elu aka nri
Ọ ga - egosi gị nhọrọ ọhụrụ, ugbu a na-akpọ "Njikọ Ngwaọrụ", windo ohuru ga egosiputa ya na nnukwu akwukwo ndu nke n’akwukwo "Jikọọ na ngwaọrụ", pịa ya ma ugbua o gha ezighachi gi na WhatsApp Web ka inyocha koodu QR
Ugbu a, jiri ekwentị gị nyochaa QR koodu a ga-egosi gị na WhatsApp WebOzugbo emechara, ihe nchọgharị ahụ ejiri ga-apụta na ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ugbu a gaa na adreesị dịka ọmụmaatụ nke ngwaọrụ ndị ọzọ na a ga-emeghe nnọkọ ahụ, maka nke ahụ, pịa "Jiri ebe a" ọ ga-emeghe ngwa ọhụrụ site na ihe nchọgharị weebụ
Usoro ahụ bụ otu ihe na ngwaọrụ ndị ahụ (kachasị 4) na nke ịchọrọ ijikọ n'out oge, ọ dị ngwa ma dịkwa ka WhatsApp Web
Echiche nke m
Multi-ngwaọrụ WhatsApp na-arụ ọrụ n'okpuru otu nkpuchi, ọ bụ ezie na oge a enwere ike iji ya na ngwaọrụ abụọ ọzọ, ruo anọ. Ihe dị mma bụ na ọ bụ ọrụ dị mkpa na oge na-aga ma ọ bụrụ na ọ tozuru oke ga-aba uru maka ndị chọrọ iji ya.
Facebook chọrọ ịmalite nhọrọ na Ọ na-apụta otu ihe m na-eme ruo ugbu a, mana ịbụ "ọtụtụ ngwaọrụ", ha achọghị ime mgbagwoju anya mgbe ha na-eji ọrụ weebụ WhatsApp. A na-atụ anya ihe ọhụrụ na nke ọhụụ, mana ọ bịara bụrụ otu ihe ahụ.
N'oge WhatsApp kwesịrị imeziwanye nke ukwuu ọ bụrụ na ịchọrọ ka ejiri atụmatụ a mee ihe n'ezie, gụnyere dịka ọmụmaatụ na enweghị oke oke. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na WhatsApp na-aga otu nzọụkwụ ọzọ na atụmatụ ọzọ ga-adị iche na ihe ọ kụziiri anyị na ụdị beta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » WhatsApp multi-ngwaọrụ, n'ezie? Anyị lelee ya !!
Top 8 uzo ozo ka AirTags maka gam akporo